Madyirwo Andaiitwa Beche naDani – Aindidiridza Huronyo padumbu pangu! – VanodaZvinhu
by DrSviro · February 3, 2016
Eish, sometimes ndikafunga madyirwo andakaitwa beche naDani, ndinobva ndatota ipapo!
Asikana ka, Dani aigona kutambisa rurimi rwake. It felt as if ainge ane battery powered tongue. Matambisiro aiita rurumi rwake pachinhu changu ka, maitoita almost hour chairo musati makwirana. Aindidya beche rangu kubva makuseni kusvika masikati and ndichinanzviwa from head to toe. Dani aindinanzwa from the soles of tsoka dzangu, between my toes, even muhapwa, the back of my knees, kumagaro and even kumhata kwangu was a regular thing. Aaah, iwe, panga pasina “no go area” Dani. It sounds off putting now kana uchiverenga but in the heat of the moment, zvinenge zvichinaka ende zvinotonaka!
That’s what I loved about him. Akanga asingaseme anything. Rurimi rwake rwainyatsodya beche rangu pese kana kuita juice yekusveta chaiko aipedza nguva yake achinyatonanzva and that drove me wild with excitement ndobva ndaita kubatidzwa chaiko ndobva ndatunda mumuromo make and he liked it asi airamba achidya beche rangu chete! How many men do that, especially ivo vedu vechi Zimbabwean? Apedza kudya beche aibva aisa makumbo angu pamashoulders ake in frozen chicken position obva atanga kurova-rova beche rangu nemboro yake yakafuta. Mboro yake yainge iri short and fat, kufuta chaiko, aiti akadhonza ganda remboro yake musoro wayo waiita kunge mushroom apo rakatota netumisodzi twuya twunotanga kubuda, Dani aiviva zvekuita when it came kuti beche rangu ritote.
Matambisiro aaiita mboro yake pabeche making tiny circles achiita ‘mix up’ juices dzedu, ndainakirwa ne the way he teased me nayo. Apinza just musoro mumatinji angu, then slightly push it further forward mubeche rangu and then my eyes would just roll nekunakirwa. Ndaibva ndaita ka pause kebkufema, ndakamiririra kuti ipinzwe zvairwadza almost everytime but ndainakirwa nazvo. Ndaida kuti ipinze rese zimboro rake, asi kumbotambisa kwaaiita asati apinza ndaibva ndamubata magaro ake and then pull him ichibva yanyura yese mubeche rangu ndachibva nda screamer or even kutotanga kuridza mhere. Zvairwadza, but like I said, I loved kakurwadza kacho.
Ndairamba ndakabatirira and really pulling him mukati kati,iye aibva atanga sliding it in and out slowly, achinyatso builder karhythm. Ainge akafinyamisa face yake achifemera pamusoro, apa zvimboro rake rakazadza beche rangu. Ndainzwa beche rangu raka gripper mboro yake and uchinzwa yakazara mukati. Akanga ane mazichende mahombe, akafuta and akarembera achirova magaro angu. Oh, when it came pakutunda, I loved kuchemerera kwaaita and pull me closer to him achindipa french kiss achigwina-gwina obva aiburitsa otanga kudiridza huronyo hwake pabeche nepadumbu rangu… Aindidiridza zveshuwa!
by DrSviro · Published June 15, 2015
by DrSviro · Published September 21, 2013
Kukwira Mukadzi waTsano
by DrSviro · Published April 11, 2014
Next story Ndakajuma zvimaBen Ten zvangu two, zvakandipedzera that day
Previous story Kusvira Shelly kaCollege Student !